कम्युनिष्टको गढमा कांग्रेसको झण्डा | Makalukhabar.com
कम्युनिष्टको गढमा कांग्रेसको झण्डा
मंसिर १६, सुनसरी । सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका कम्युनिष्टहरुको गढ भएकै स्थानमा नेपाली कांग्रेसले २८ बर्षपछि आफ्नो झण्डा फहराउन सफल भएको छ । धरानमा सोमबार बिहान सम्पन्न मतगणनाको परिणाम आए लगतै नव निर्वाचित मेयर तिलक राईले आफूले कम्युनिष्टकै भोटले जित हाँसिल गरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
‘यो कांग्रेसको जीत मात्र होइन, जनताको जीतत हो । मलाई कम्युनिष्ट साथीहरुले पनि मत दिएर जिताउनुभएको छ’, उनले भने । आफू सबैसँग मिलेर काम गर्ने राईले बताए ।
नव निर्वाचित मेयर राईले मतदाताहरुलाई धन्यवाद दिँदै जनताको अभिलाषा पूरा गर्न सबैलाई सहमतिमा लिएर काम गर्ने बताए ।
धरानमा २०४८ पछिका स्थानीय चुनावमा कम्युनिष्ट पार्टीले मात्रै जित्दै आएको थियो । जहाँ २०४८ सालमा ध्यानबहादुर राई, २०५४ सालमा मनोज मेन्याङबो र २०७४ मा तारा सुब्बाले मेयर पदमा चुनाव जितेका थिए । पञ्चायतकालको चुनाव पनि जनपक्षीय उम्मेदवारले जितेको इतिहास छ ।
यसपटकको उपनिर्वाचनमा भने नेपाली काग्रेसले कम्युनिष्टको लाल किल्ला भत्काएको छ ।
को हुन् तिलक राई ?
सुनसरी धरान उपमहानगरपालिका वडा नं १८ मा भूपू बेलायती सैनिक बुवा मित्रकुमार राई र आमा गंगा राईको कोखबाट बि.स. २०३१ साल कात्तिक २ गते सुनसरीको धरानमा जन्मेका तिलक राई लाहुरेका छोरा भएर राजनीतिमा आउनेहरु मध्येमा थारैमा पर्छन् ।
धरान १८ स्थित रहेको डिपो उच्च मा बिबाट बि.सं २०४८ सालमा एसएलसी दिएका हुन्। उनले धरानकै महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा आइकम समेत पढेका उनले राईले २०५४ सालमा वडा नम्बर १८ मा सदस्य पदको चुनावमा पनि हार ब्यहोरेका थिए। पछि २०७४ असार १४ मा मेयरमा उठेका राई ४ हजार ८७३ मतले तत्कालीन नेकपा एमालेका तारा सुब्बासंग धरनमानै पराजित भएका थिए ।
तिलक राईले २०४७ सालदेखि तरुण दलबाट आफ्नो राजनितीक यात्रा सुरु गरेका हुन् । २०५७ मा धरानको तरुण दल अध्यक्ष समेत रहेका राई त्यसको ५ वर्षपछि नेपाली काङ्ग्रेस धरानको नगर सचिव समेत बनेका थिए भने, २०७२ मा उनी धरान नगर सभापति नै भएका थिए ।
त्यस्तै राई उद्योग वाणिज्य संघका नेतादेखि शीरीरिक सुगठनका रेफ्री सम्म भइसकेका ब्यक्ति हुन् । तिलक राई व्यापारिक नेता पनि हुन्। उनी सुनसरी उद्योग वणिज्य संघ धरानको कार्यकारी सचिवसम्म भएका छन्।
‘फेसअफ प्लस टु’ को फाइनल मंसिर २३ मा